Isiqhingi saseReunion | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Izindawo zokuvakasha, EFrance
Izinsalela zemibuso emidala nengalungile zisabonakala kwamanye amagumbi omhlaba. Kuyindaba ye- U-Isla Reunión, enye yamanje Izindawo ezingaphesheya kwezilwandle zaseFrance etholakala ku- Indian Ocean.
Isiqhingi iReunion siseduze neMadagascar futhi sinamathafa amahle impela. Ngabe ufuna ukuya eholidini kuleli kona elihle lomhlaba? Nazo-ke.
1 U-Isla Reunión
2 Uhambo oluya esiQhingini saseReunion
Lesi siqhingi sinezinto cishe Amakhilomitha skwele ingaphezulu futhi inomsuka wentaba-mlilo. Empeleni, intabamlilo yayo esebenzayo inyuka cishe ngamamitha angu-2630 ngaphezu kogu lolwandle futhi icishe ifane nezintaba-mlilo ezinamandla neziphilayo zaseHawaii. Iyintaba-mlilo esebenzayo, ibe nokuqhuma okuyikhulu kusukela ngekhulu leshumi nesikhombisa kuze kube manje futhi njengoba kungeyona yodwa, lokhu I-Piton de la Fournaise ihambisana ne- IPython des Neiges, njalo kufanele uqaphele.
Lesi siqhingi sithokozela i- isimo sezulu esishisayo, kepha ukuphakama kuyenza i-oscillate. Ngakho-ke, lina kakhulu futhi liyashisa phakathi kukaNovemba no-Ephreli futhi lipholile phakathi kukaMeyi noNovemba. Lesi simo sezulu kanye nomsebenzi waso wokwakheka komhlaba okunika lesi siqhingi i iimpilo yemvelo engakholeki. Kunezinhlobonhlobo eziningi zezinyoni ezikhona kanye nezitshalo ezinhle, kepha futhi kunezimangaliso ogwini, ngaphansi kolwandle, nezimangaliso zalo ezinhle Izixhobo zamakhorali.
Igcina umsebenzi wayo omkhulu wezomnotho, i- ukukhiqizwa kukamoba kamoba, kepha cishe yonke into ebaluleke kakhulu, amandla nokudla. Inani labantu ayifinyeleli kubantu abayizigidi futhi kunenqwaba yezinhlanga, phakathi kwamaNdiya, ama-Afrika, iMadagascar kanye nabaseYurophu. Ukuba yinsimu yezilwandle yaseFrance lapha ulimi olusemthethweni isiFulentshi, kodwa nesiCreole sikhulunywa kakhulu.
Uhambo oluya esiQhingini saseReunion
Lesi siqhingi sigcwele ukuqhathanisa, sihlukile. Kungenzeka kungathandeki njengabanye omakhelwane bayo, iMauritius noma iSeychelles, kepha uma ufuna ukubalekela imizila edumile kuyindawo enhle ongaya kuyo.
Inentabamlilo esebenzayo, amabhishi anamanzi acwebile futhi afudumele, izintaba namahlathi. Ngale mibono ungenza konke kusuka ekulaleni phansi kuze kufike ekushisweni yilanga futhi akukho okunye okuhamba ngokuzulazula lapho wenza konke.
Ingaphakathi leReunion Island linezintaba futhi limangele. Nansi intabamlilo elele, iSalazies Mountain, entshonalanga. Kukhona nentaba iGran Brule, empumalanga, kanti-ke nentaba-mlilo ephapheme, iPython de la Fournaise nentaba-mlilo elele, iPython des Nieges enamamitha angaphezudlwana nje kuka-3 ukuphakama.
Hay ama-boilers amathathu noma amaseksi abusa ukwakheka kwawo kwangaphakathi futhi abonwa njengezindawo zemidlalo zemvelo. ICaldera yintaba-mlilo eyazidiliza yodwa ngakho-ke kuyikhadi leposi elingenakulibaleka. Izinqe zi ISalazie, iCilaos neMafate. Bonke banezinto zabo: noma ngabe bakulungele ukuhamba izintaba, noma ukuhamba ngesikebhe, noma ngebhayisikili, ukusuka emzaneni wezintaba kuya emzaneni osezintabeni. Akekho omuhle ngaphezu komunye. Zonke zinjalo.
ICirque de Salazie iyona caldera enkulu futhi eluhlaza kunazo zonke kwabathathu. Inomgqomo ojulile futhi omude, onqunywe yi izimpophoma ezingaphezu kwezi-100 nezigodi namagquma agudlukayo. Impophoma iLe Voille de la Marièe ingenye yezindawo ezinhle kakhulu lapha. Izigidi zamaconsi wesifutho sayo zibukeka njenge-tulle ... Lapha futhi ungahamba ngesikebhe ngokusebenzisa imigodi yayo ejulile futhi uvakashele indawo enhle Idolobhana lase-Hell-Bourg, kahle isiFulentshi.
ICirque de Cilaos kungenye isimanga, embozwe izimbali namahlathi namachibi nezimpophoma. Imikhumbi nayo iyathandwa, njengoba kunjalo nangokukhuphuka noma ukuqwala intaba. Kunemizila eminingi futhi eminye ikuholela kufayela le- Idolobhana laseCilaos, nezivini zayo noma isigodi ILa Roche Merveilleuse, ngamabhavu ashisayo. Le caldera isenkabeni yesiqhingi ngqo. Ngokuqhubekayo enyakatho-ntshonalanga yi I-Cirque de Mafate.
Lesi kubhayela lizungezwe ngokuphelele izintaba futhi kuyindawo yasendle kakhulu lapho ufika kuphela ngendiza enophephela emhlane noma ngezinyawo. Ayikho imigwaqo egandayiwe, azikho izimoto, ngakho-ke kukhona abahamba izintaba kuphela. Ngokuvamile, izivakashi ziza lapha zivela kwamanye ama-boilers amabili, angafinyelelwa ngemoto uma ufuna. Umqondo wokufika ngendiza, noma kunjalo, mkhulu kakhulu.
Leli kubhayela lesithathu inomuzi owodwa kuphela. Abantu bafika kuphela ngekhulu le-XNUMX, babeyizigqila eziphunyuka kubaninizo. Umzana kuphela lapha, Okusha. Awunagesi, unamapaneli elanga kuphela noma odonsa udizili. Indawo ekude futhi engajwayelekile.
Mayelana ugu lweReunion Island, oluhle kakhulu abantu, ukuthi batholakala amadolobha nemizana. Ugu olusentshonalanga lungolwakho amabhishi athule lapho ukuqhuba khona imidlalo eminingi yamanzi. Labo abathanda i- ukubhukuda ngesikebhe nokuntywila banomuzi we I-St-Gilles-les-Bains Hhayi, kukhona kuphela imifula yamakhorali lapho. Ngokungafani, ISt. Leu ilungele ama-surfers nabantu abafuna ukuhamba ezimakethe futhi bazi isiko i-creole.
Ugu olusenyakatho lunedolobha lase I-St. Denis, uzibuthe wabavakashi njengoba unikeza amabhishi nezintaba. Nakhu futhi izindawo zokudlela, amahhotela, izindawo zobuciko, izingadi .... Ugu olusempumalanga lapho kukhona umoba namasimu e-vanilla nemizi emihle. Yazi, ugu lapha lusendle kakhulu.
Ekugcineni, abangane ababili be-volcano: I-Piton des Neiges ne-Piton de la Fournaise. IPiton des Neiges ingamamitha angu-3070 ukuphakama futhi ibheke lesi siqhingi. Kusesifundeni esisenyakatho emaphakathi futhi kuyintaba-mlilo ecekelisiwe ebingasasebenzi cishe iminyaka eyizinkulungwane ezimbili. Inomzila oholela phezulu yize kungenzima kangako ukufika lapho ngezinyawo. Kukhona indawo yokugcina izinto eziphilayo emithambekeni yayo enhle.
Ngokwengxenye yayo, iPiton de la Fournaise isekhoneni eliseningizimu-mpumalanga yesiqhingi. Ingenye yezintaba-mlilo eziqhuma kakhulu emhlabeni futhi ingamamitha angu-2631 ukuphakama. Ngokusobala, iyindawo ethandwa kakhulu esiQhingini saseReunion. Ngakho-ke, iReunion Island ingeyabathandi bemvelo enhle kepha eyeqisayo. Ngabe unento yakhe yokuhlanganisa uhlu lwakho lwezindawo ezingaba khona ngemuva kwalolu bhubhane olubi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » EFrance » U-Isla Reunión
I-Combarro, idolobha elihle eGalicia